I-china track track roller ye-KOMATSU dozer undercarriage abakhiqizi nabaphakeli | Jinjia
I-single flange, i-double flange track roller kufanelekile kubavubukuli abancane abangama-0.2-120 kanye nabembi abasindayo nogandaganda. Ama-roller version akhethekile emishini yokugaya imigwaqo, ama-pavers, amahlathi kanye nezicelo zezolimo.
Idizayini yekhodi ephindwe kabili yempilo kanye nokuthambisa okude kwempilo yenza i-roller track impilo enempilo nokusebenza okuhle.
Ikhwalithi TRACK roller
1. Imizimba yegobolondo yokuqina eyenziwe lukhuni noma engaphezulu iqukethe ukumelana nokugqoka futhi iqinisekise amandla ezakhiwo aphakeme nokumelana nokuguquguquka. Izimpawu ziqinisekisa ukuthanjiswa unomphela kokuqina okukhulu.
2. Izingxenye zekhwalithi zama-roller kufaka phakathi ama-hubs, amakhola, ama-bimetal bushings, shaft, nezimpawu zamazinga aphezulu zokusebenza
3.Ukwenziwa kokucubungula okushisayo kokushisa: ukufinyelela kwegobolondo le-roller ekusatshalalisweni kokugeleza okuhle ngaphakathi kwesakhiwo se-fiber.
Ukwehlukanisa ukucima noma ngokuqeda ukwelashwa okushisayo, ama-roller anomphumela wokumelana nokuqhuma futhi anempilo ende.
Inani Lekhwalithi: Izinto zegobolondo le-Roller: 50Mn / 45 # / 40Mn2
Ubulukhuni Bendawo: HRC53-56
Qeda ukujula:> 7mm
Izinto ze-roller shaft: 45 #
Qeda ukujula:> 2mm
Izinto zekhololi ze-Roller: QT450
5.Ikhono lokukhiqiza: 5000pcs / Inyanga. UKWAKHA ifektri yegobolondo le-roller, kanye nefektri ye-Iron yokulingisa ikhola yama-roller, ukusetjenziselwa izinto eziqediwe, kahle nekhwalithi ephezulu eyenziwe.
Amathiphu wokufakwa kwethrekhi entsha
1. Ukuxuba ama-tracker amasha namadala ethrekhi ohlangothini olufanayo kungalayisha kakhulu amasha njengoba ahlala phansi kunalawo agugile, ngakho-ke kuthatha isisindo esiningi esengeziwe.
2. Uma kungenjalo kususwa wonke ama-rollers amasha angaphansi, kunconywa ukuthi ilingane yonke ingxenye engcono ngakolunye uhlangothi nayo yonke emisha ngakolunye uhlangothi. Lokhu kugcina ingcindezi ku-roller ngayinye ngaphandle kokulayisha ngokweqile ngakunye.
3. Lapho ushintsha i-roller entsha, ungahambi amabanga amade ngaphandle kokumisa umshini njalo njengoba bekwazi ukushisa futhi bambe. Misa yonke imizuzu engu-4-5 bese uya kolunye uhlangothi kancane ukusiza ukuhambisa uwoyela. Lokhu kuqapha okujwayelekile emahoreni ayikhulu okuqala
Langaphambilini Landelela Izicathulo Zethrekhi Yokukhasa
Olandelayo: Komatsu track link assy nomkhiqizi eChina
I-Bulldozer Track Roller
Ama-Roller wethrekhi ephindwe kabili